Iyo MediaLight Warranty - MediaLight Bias Mwenje
Iyo MediaLight Warranty
Iyo MediaLight inosanganisira yakazara makore mashanu warandi yezvinhu zvese. Isu tinotovhara kurasikirwa uye kuba.
Iyo MediaLight ine yakakwira kumusoro kumberi mutengo kupfuura mamwe mwenje weLED nekuti tinoshandisa zvirinani, zvakaringana maLED uye akawanda akasimba zvinhu. Isu tinogadzira zvese nema modular maitiro ekuti iyo system ive nyore kugadzirisa kana chimwe chinhu chikatadza. Nemaitiro anodhura, iwe kazhinji unofanirwa kutsiva iyo sisitimu yese kana chimwe chinhu chapwanyika. Izvi zvinoreva kuti nekufamba kwenguva, chigadzirwa chedu hachingoite zvirinani - zvinodhura zvishoma!
Kana chimwe chinhu chikaitika kuMediaLight yako, isu tinogona kuona chakakonzera uye titumire chakakodzera kutsiva chikamu kana kuchitsiva mahara.
Mienzaniso yeakavharidzirwa garandi zvirevo:
"Imbwa yakatsenga remote control yangu"
"Netsaona ndadambura magumo emagetsi erobheni."
"Bhesimendi rakazara ndokutora TV yangu ndokuenda nayo."
"Magetsi akamira kushanda uye handizive kuti sei."
"Studio yangu yakabiwa" (yakavharwa kana gwaro remapurisa rikapihwa).
"Ndakanganisa kuiswa kwangu."
Kuramba kubatsira MediaLight mumiriri kunetsa chinokonzera dambudziko kubva pane runyorwa rwezvinhu zvinowanzo sangana nazvo.
Mune ino mamiriro, isu hatigone kutumira zvinotsiviwa zvikamu kudzamara ruzivo rwapihwa mukati menguva yewarandi.
Kuparadza nemaune kana kurasa
Kutakura kwemumba mushure memakore maviri kubva pazuva rekutenga. Mushure memakore maviri, isu tinotsiva chero chakaremara kana chisipo zvikamu kusvika makore mashanu kubva pazuva rekutenga, asi tinotumira invoice CHETE yemutengo wepositi (kana iwe unogona kupa UPS kana Fedex account).
Yese International shipping kutanga 65 mazuva mushure mekugamuchira chigadzirwa chako. Kunze kwepakarasika mapakeji (ona yedu Peji peji kudzidza kana pasuru ichinzi yakarasika) kana mayunitsi akaremara, isu hativharidzire kutakura kwenyika mushure memazuva makumi matanhatu neshanu. Isu tichatsiva zvikamu zvinodiwa pasina muripo, asi chengetedza kodzero yekuisa invoice yekutumira zvikamu zvisati zvatumirwa. Zvinenge zvirinani zvirinani kutenga MediaLight kubva kumutengesi mudunhu rako anozovhara kutumira zvimwe zvinotsiva.
Kubva panguva yaunoisa yako MediaLight, isu tichava ipapo kuzobatsira. Kana paine chinokanganisika nezvigadzirwa zvedu, usazvidya moyo! Tinoda kukuyeuchidza izvo zvakaita kuti tisimuke kubva kune mamwe makambani emwenje munzvimbo yekutanga: Hunhu hwezvinhu zvinogara kwemakore.
Isu takaona kuti paive nekahomba gomba mumusika kana zvasvika pakururama, mhando uye sevhisi. Tinobata vatengesi vedu kune zvakaenzana zvinodiwa. Kana isu tikatsiva chikamu, vatengesi vedu vanotidzosera - izvi zvinoita kuti zvigadzirwa zvedu zvese zvive nani uye zvinoita kuti munhu wese azvidavirire.
MediaLight inoita zvarinotaura pachitini. Isu tasanganisira zvese zvaunoda kuti uise, saka panenge pasisina mamwe maturusi anodikanwa kana kuenda kuzvitoro zvehurdware kuti utange neMediaLight nhasi!